UDrones - Izindaba zegajethi | Izindaba zamagajethi
Uma ufuna imininingwane ngeDrones, lapho-ke lesi sigaba yilokho kanye okudingayo. Zonke izindaba mayelana nama-drones, amamodeli amasha angena emakethe, angcono kakhulu ukuhlolwa kwe-drone nokuhlaziywa ngeSpanishi futhi yakhelwe wena.
Sihlaziya futhi sihlole ama-drones azo zonke izinhlobo, kusuka ku-drone encane kakhulu kuye racing drones esheshayo emakethe ngokusebenzisa ama-drones angaphakathi noma amanye amamodeli enzelwe abasebenzisi abathuthukile kancane.
Izindaba zeDrone nokuhlolwa
Nayi i- izindaba zakamuva ze-drone nokuhlolwa kushicilelwe ku-Actualidad Gadget. Sithemba ukuthi uyabathanda!
Por UMiguel Gaton kwenza Izinyanga ze-10 .
Namuhla sikulethela ku-Actualidad Gadget ukubuyekezwa kwe-SwellPro's Splashdrone 3+ drone, idrone engenamanzi ekwazi ukundiza ...
Ukuhlaziywa kwe-Star Wars Drones
Por UMiguel Gaton kwenza iminyaka 3 .
Njengomlandeli omuhle weSaga ye-Star Wars, ukuvivinywa kwalawa ma-drones kube yinto ekhethekile. Cha…
Namuhla sikulethela ukuhlaziywa kwedrone entsha ebesiyihlola amasonto ambalwa. Igama layo nguVR Drone ...
IGoPro iyeka ukuthengisa ama-drones futhi idiliza abasebenzi abangaphezu kwama-250
Kube yimfihlo evulekile isikhathi esithile futhi ekugcineni sekuqinisekisiwe. IGoPro ivala ukuhlukaniswa kwayo kwe ...
Por URuben gallardo kwenza iminyaka 4 .
Ukuthi i-Amazon ifuna ukuguqula uhlelo lokulethwa kwamaphakeji ayo, kuyiqiniso. Ngubani ofuna ukukwenza ngokusebenzisa ...
I-Amazon inikeza imininingwane yokuthi ihlose ukusabalalisa kanjani ukuthenga kwakho ngama-drones
UJeff Bezos ubeseneminyaka emisha evuselele izinto ezintsha manje ebesingazicabangi, umkhulu wezitolo ...
Le bhulogi yezobuchwepheshe futhi okuwukuphela kwereferensi esingayenza emnothweni ihlobene neyodwa ...
Ukuhlaziywa kweParrot Swing, indiza yehhafu yedrone isigamu se-rc
Por UMiguel Gaton kwenza iminyaka 4 .
Lesi sikhathi sikulethela ukuhlaziywa kweParrot Swing, i-minidrone entsha evela kumkhiqizi uParrot nokuthi isinikeza yona ...
Por UMiguel Gaton kwenza iminyaka 5 .
Ukusizakala ngoKhisimusi kuyasondela, ezinsukwini ezimbalwa ezizayo sizokwethula izibuyekezo ezimbalwa zama-drones womabili ...
Namuhla sikulethela ukuhlaziywa kweBebop 2, enye yama-Parrot drones abangela ukukhuluma kakhulu ...
Uma uthanda ama-drones, namhlanje sikulethela i-Hexadrone skyview wifi, idrone efana ne ...